जसपा संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा. बाबुराम भट्टराई नियुक्त | My News Nepal
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा. बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएका छन् । जसपा कार्यकारिणी समितिको मंगलबार सम्पन्न दुई दिने बैठकले वरिष्ठ नेता भट्टराईलाई परिषद्को अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । भट्टराई नेतृत्वको परिषद्प्रति केन्द्रीय समिति उत्तरदायी हुनुपर्ने गरी विधान पनि पारित भएको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० र समाजवादी पार्टीका बीचमा एकीकरण भई गत १० वैशाखमा जसपाको घोषणा भएको हो । जसपामा पदाधिकारी चयनका साथै जिम्मेवारी बाँडफाँट अझै हुन सकेको छैन् । शीर्ष नेताहरूकै बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा महत्वपूर्ण काम अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ ।